सबै भन्दा साधारण gynecological रोग coleitis छ। यो लक्षण लगभग हरेक स्त्रीलाई परिचित छन्। तिनीहरूले स्त्रीरोग विशेषज्ञ बारी बाध्य नियम, रूपमा बरु अप्रिय र। उपचार समय खर्च गर्न छैन भने, रोग को एक पुरानो फारम छ, र सुनिंनु को फैलियो सक्नुहुन्छ cervix र गर्भाशय। यो बाँझोपन र अन्य अप्रिय परिणाम निम्त्याउन सक्छ।
त्यसैले लक्षण coleitis:
असामान्य योनी छुट्टी (गंध, परिवर्तन बनावट, रंग, मात्रा, पीप impurity, रगत, आदि);
सुनिंनु र राता;
खुजली, जननांग जल;
urination र सेक्स को समयमा दुखाइ।
सधैं सबै सूचीबद्ध लक्षण प्रस्तुत। तर, तिनीहरूलाई कुनै पनि उपस्थिति - डाक्टर एक यात्रा को लागि एक अवसर छ। योनी को सुनिंनु विशिष्ट र गैर विशिष्ट हुन सक्छ। पहिलो मामला मा एसटीआई को कारण, र हुन सक्छ शरीर मा सानो परिमाणमा हुन जो दोस्रो अवसरवादी जीव बन्नेछ।
विशिष्ट coleitis असुरक्षित सेक्स पछि सामान्यतया हुन्छ। आफ्नो उपचार venereologists संलग्न। यस मामला मा, एक महिला आफ्नो यौन साझेदार संक्रमित गर्न सक्छ। आज को सबै भन्दा साधारण causative एजेन्ट chlamydia, trihomanady, gonokkoki छन्, र सुनिंनु को herpes भाइरस कारण हुन सक्छ।
सामान्यतया vaginitis को लक्षण रोगजनक निर्भर छन्, तर केवल उहाँलाई लागि निदान पनि एक डाक्टर राख्न गाह्रो छ। पनि झन् धेरै संक्रमण फेला, त्यसैले यो एक व्यापक परीक्षा पास गर्न आवश्यक छ। तपाईं आत्म-medicate, यो मामला मा चिकित्सा रूपमा अपर्याप्त प्रभावकारी हुन र केवल अवस्था exacerbate सक्छ गर्न सक्नुहुन्छ। को उपचार पहिले सजिलो, छोटो छ र सस्ता यो हुनेछ, योग्य छ।
गैर विशिष्ट vaginitis कारण अवसरवादी वनस्पति को तीव्र वृद्धि छ। यो विभिन्न कारक द्वारा facilitated गर्न सकिन्छ:
एन्टिबायोटिक (विशेष गरी लामो र अनियन्त्रित);
endocrine रोगहरु ;
योनी को सुनिंनु को सबै भन्दा साधारण गैर-विशेष activators Gardnerella, Candida छन् ई कोलाई, Staphylococcus, streptococcus।
एक महिला coleitis मा suspects भने, त्यसपछि यो जरूरी causative एजेन्ट पत्ता लगाउन सकेसम्म डाक्टर भ्रमण हो। सर्वेक्षण निम्न प्रक्रिया समावेश हुनेछ:
को वनस्पति मा धब्बा;
असामान्य कक्षहरू मा विश्लेषण;
antibiotikogrammy र ureaplasma र म्यकोप्लास्मा संग रोगजनकों को inoculation;
STDs लागि PCR।
यो विशेष स्थिति र रोगी को वित्तीय सम्भावनाहरू निर्भर गर्ने चिकित्सक गरेको विवेक द्वारा निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ कि एक सामान्य अल्गोरिदम छ।
योनी को सुनिंनु को उपचार जो संवेदनशील रोगजनकों छन् लगे लागूपदार्थ छ। यो एन्टिबायोटिक, antiviral लागूपदार्थ र antifungals संग उपचार गर्न सकिन्छ। यसबाहेक अक्सर नियुक्त प्रतिरक्षा लागूपदार्थ gepatoprotektory, microflora पुनर्स्थापना हो। स्थानीय उपचार व्यापक systemic उपचार बाहेक प्रयोग गरिन्छ। योनी suppositories, पाटी र suppositories प्रयोग।
Coleitis, लक्षण जो पनि जीव को व्यक्तिगत विशेषताहरु निर्भर छन्, रोग को लक्षण गायब यदि निको हुने मानिन्छ, र विश्लेषण सामान्यीकृत थिए। उपचार को प्रभावकारिता सामान्य एक महिना धेरै पटक पछि जाँच गरिन्छ।
पुरानो coleitis तर, कम उच्चारण, एउटै लक्षण छ। कहिलेकाहीं तिनीहरूले पनि पूर्ण अनुपस्थित हुन सक्छ। त्यसैले, यो तुरुन्त स्त्रीरोग विशेषज्ञ भ्रमण गर्न तीव्र प्रक्रियाहरू, साथै योजना उपचार भइरहेको महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसैले coleitis माथि छलफल गरिएको छ जो, लक्षण र उपचार एकदम सजिलै को रोगजनक बिना सुरुमा सफाया। चिकित्सा यसको दीर्घकालीन फारम थप समय र पैसा आवश्यक हुनेछ। त्यसैले, यो नियमित एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ भ्रमण र सुनिंनु को संकेत को उपस्थिति को सल्लाह खोज्न निश्चित हुन आवश्यक छ। कुनै उपचार pelvic दुखाइ, अस्थानिक गर्भावस्था, प्रसव र बाँझोपन समस्या संग fraught छ।
Progesterone र टेस्टोस्टेरोनको मा gonads को पेप्टाइड हर्मोन बाहिरु नियामक उचित सञ्चालन, साथै सहभागी
विकृति वा दर - कुल प्रोटिन भन्नेछु
छाला मा स्पट के?
"हिउँमा पाल्पा": फिल्मको समीक्षा
तपाईं के एक साधारण nettle सक्छन् पनि थाहा छैन!
Truckers लागि Walkie-talkies: वर्णन, पद
राउटर डी-लिङ्क डीएपी 1360: अवलोकन, सेटअप, निर्देशन, विनिर्देशों र समीक्षा
दबाइ 'इंटरफेरन' (नाक खस्छ)। प्रमाण को विवरण। प्रयोगको लागि निर्देशन
Insoles गरम: समीक्षा। Insoles शीतकालीन: मूल्य
ल्यापटप एप्पल Macbook एयर: ग्राहक समीक्षा र सुविधाहरू
के पश्चिमी छ। सबै भन्दा राम्रो चलचित्र-पश्चिमी: नाम र विवरण
को विधि र निर्देशन: Scrin को ल्यापटप रूपमा